သက်ဝေ: အမှတ်စဉ် ၄၅
Posted by သက်ဝေ at 12:44 AM
Thet Naing Tun January 11, 2014 at 1:04 AM
Hmoo January 11, 2014 at 5:12 AM
Thandar Lwin January 11, 2014 at 5:47 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ အမသက် ။
၂၀၁၄ တစ်နှစ်လုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ <3
စုချစ် January 11, 2014 at 9:36 AM
အမှတ်စဉ်၄၅ သာဆိုတယ်... အပြင်မှာလူမြင်ရရင် ၂၅လောက်ပဲထင်ရတယ်... မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ... အစ်မသက်... :)
မိုးငွေ့........ January 11, 2014 at 11:52 AM
မမချစ်သက်ဝေပြောသွားခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးလိုလိုမီးမီးနဲ့တော်တော်တူတယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သော ချစ်သက်ဝေ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ...ဆန္ဒများအားလုံးပြည့်ဝပါစေ...။ အက်ဆေးလှလှလေးတွေများများရေးနိုင်ပါစေ...း)
pandora January 11, 2014 at 12:14 PM
အေးဆေးပါ ၁၅ ၁၅ ၁၅ :)
စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ အစ်မသက်ဝေ..:) အစ်မစာတွေဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်..
Tin January 11, 2014 at 12:25 PM
​ပျော်စရာ ​မွေး ​နေ့ ဖြစ်​ပါ ​စေ သား :-) :-) :-)
ritcivil84singapore January 11, 2014 at 12:59 PM
Happy birthday!!!!!wish you all the best.
Kay Thwel January 11, 2014 at 1:39 PM
Power 45 <3
Vista January 11, 2014 at 2:03 PM
happy birthday to you too ma thet .. mwahh
ဇွန်မိုးစက် January 11, 2014 at 8:04 PM
အစ်မရေ... တစ်နေကုန်အပြင်ရောက်နေလို့ ခုမှ ပို့စ်ဖတ်ရတယ်။ အချိန်မနှောင်းသေးခင် အပြေးလေးလာပြီး နှုတ်ဆက်တယ်နော်။ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံသော မွေးနေ့မင်္ဂလာပေါင်းများစွာကို ချစ်တဲ့မိသားစုနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေလို့...။း))
blackroze January 12, 2014 at 3:20 AM
40s မွေးနေ့တွေရဲ့ အရသာက အပွေးမကုန့်တကုန် သနပ်ခါးတုံးကို သွေးပြီး လိမ်းရသလိုပဲလို့ ထင်မိတယ်... :)
rose of sharon January 12, 2014 at 3:52 PM
Happy birthday အမသက်ဝေ
ရင်လှိုင်း January 12, 2014 at 6:25 PM
မမသက် မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
B!tter SwEEt January 13, 2014 at 12:25 PM
အမှတ်စဉ် ၄၅ အတွက်
ပျော်ရွှင်ဖွယ်သော မွေးနေ့လေးပါပဲ အမ။
တန်ခူး January 14, 2014 at 10:54 PM